Tsy vitan’ny mahery am-boalohany… | NewsMada
Tsy vitan’ny mahery am-boalohany…
Tsy mitsaha-mitombo ireo vondrona na antokon’olona manilika ny fitondrana ankehitriny. Nisesisesy ny fanehoan-kevitra, taorian’ny fanambaran’ny AFP fa hidina an-dalambe eny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena, anio. Na hahomby na tsia io hetsika io, taratra fa malailay fonosana amin’ny mpitondra fanjakana ny « vahoaka sasany ». Fa any amin’ny fanehoan-kery toy izany koa ve anefa ny paikady tena mahomby ? Anjaran’ny tsirairay ny mamaly izany. Ao ireo tsy mankasitraka izany, fa tsy vitsy kosa ny manohana. Fa ho avy eny amin’ny toerana voatondra daholo ve anefa ? Rehefa avy eo isika mahita azy.
Sahirana ny vahoaka ka mitady izay ho azy. Ilay nantenaina anefa, toa tsy hita be ihany izay tena ataony sy fandraisana andraikitra sahaniny. Vao mainka aza mamoky lainga ireo heveriny ho bado. Ho tojo hatraiza izany ? Ny fotoana no hitsara sy hamaly izany. « Ny bainga voavadika ihany no vavolombelon’ny mpiasa », hoy ny ohabolan-drazana izay.
Ny zava-misy aloha, tsy an-tanàn-dehibe, tsy ambanivohitra, toa samy tsy milamina daholo. Manjaka ny fitsaram-bahoaka, ny tsy fandriampahalemana ary ny fahantrana toa zary efa fiainana andavanandro mihitsy. Mbola sahy hilaza ihany ve ny tomponandraikitra fa tany milamina i Madagasikara ? Samy manana ny fijeriny anefa ny tsirairay eo amin’ny sehatra sahaniny sy misy azy. Lakalaka izy ity e !
Lakalaka tokoa. Samy manao izay saim-pantany na ny mpitondra na ireo mitonon-tena ho mpanohitra. Mandroritra amin’izay mahametimety azy. Tombontsoa ihany anefa no ao ambadik’izany. Ny valala tsy mandady harona no mizaka ny vokany. Ho aiza moa fa mifanipaka an-karona ao ihany, sady very fanahy mbola velona teren’ny fiakaram-bidin’ny fiainana. Soa ihany fa Malagasy mahari-pery ka mioitra ihany na mafy aza ny manjo. Haharitra hafiriana anefa izay fiaretana izay ? Aleo hisosa ny andro dia ho hita eo !
Ho hita eo tokoa izay tsy hahazaka intsony amin’ny farany. Tsy ny be vovokaina mantsy no ho mpandresy fa izay mahatojo hatramin’ny farany. Hahakazaka mantsy ity fiainana ity, tsy vitan’ny mahery am-boalohany.